Python, kan ugu caansan Jaamacadaha Mareykanka | Laga soo bilaabo Linux
Wax badan ayaan ka hadalnay Python Halkan horeba. Maaha wax qarsoodi ah in dad badani ay ka mid yihiin luqadaha la tixgelinayo marka la horumarinayo, waa mid xoog badan, awood badan, lehna qaloocasho waxbarasho oo aan aad u murugsanayn iyo waxa (sida ay ila tahay) ka dhigaysa mid ka qurux badan kuwa kale, Waa isugeyn 100% ah.
Waxaa lagu barnaamijin karaa Python oo loogu talagalay Mac, Linux, Windows, Android… kaalay, waa wax la yaab leh, kaliya waa inaan turjubaan ku dhejisannaa kumbuyuutarka macmiilka waana intaas, lambarkayagu wuxuu ku shaqeyn doonaa sida ugu fiican, xoogaa hagaajin yar ah.
Halkan waxaan kuula imid war ku faafinaya shabaqda oo aan ka qaatay aadanaha:
Dhawaan Philip Guo, Kaaliyaha Professor of Science Science ee Jaamacadda Rochester (jaamacad gaar loo leeyahay oo ku taal New York) iyo xubin ka mid ah ACM, wuxuu sameeyay daraasad uu ku muujiyey taas Python hadda waa luuqadda ugu caansan ee lagu barayo koorsooyinka sayniska kombiyuutarka hordhaca ah ee qiimeynta sare ee waaxyaha Mareykanka.
En booska labaad waxay ku taal Java (22 ka mid ah 39-ka jaamacadood, iskuulada qaarkood waxaa jira qaab isku dhafan oo waxay adeegsadaan in ka badan hal luqadood), tan saddexaad ee MATLAB oo si ballaaran loo adeegsado in lagu soo bandhigo saynisyahannada iyo injineerada barnaamijyada, oo ay ku xigto heerka isticmaalka C iyo C ++ ee tan ku adkaaday qaybta toban sano ka hor.
Java shaki la’aan wuxuu xukumay kaalinta 1-aad sanadihii la soo dhaafay, maadaama tobankii sano ee la soo dhaafay taleefannada gacanta ay si aad ah u koraan, taleefannadu si xariif ah ayey u sii kordhayaan sidaa darteedna waxay leeyihiin adeegsiyo badan waxayna taageeraan barnaamijyo badan ... sida barnaamijyadan waxaa lagu qoraa Java, waana sababta Java muddo dheer ayuu boqor ahaa. Si kastaba ha noqotee, tani way isbeddeli kartaa sannadaha soo socda (haddii aysan hore u ahayn).
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Python, kan ugu caansan Jaamacadaha Mareykanka
Waan filayey. Taasi waa sababta aan aad ugu isticmaalo luqaddaas.
Nasiib darro in dad aad u tiro yar oo martigeliya ay taageeraan, haddii ay taageeraanna, waxay ka tagi lahaayeen isha.
Nacas! Waxaad la mid tahay saaxiibkey oo aan ka soo qaatay hacklab aan aado. Sababta oo ah wakiilkaaga isticmaalaha (illaa aad wax ka beddelayso mooyee), waxaad isticmaashaa 'gentoo' oo waxaad jeceshahay borotoonka ...
Dhanka kale, martigelinta waxay kuxirantahay. Tusaale ahaan, shirkadaha qaaska ah ee aanan u xayeysiin doonin waxaad haysaa mashiinno farsameed oo aad si fiican u xamili karto oo aad ku rakibi karto nidaamka hawlgalka aad rabto gacantaada serverka, ama aad ku rakibi karto apache + python ama xoogaa isku mid ah. Sidoo kale nginx waxaad ka faa'iideysan kartaa fudeydnaanta qaabeynta cgi si aad ugu wareejiso faylasha .py, taas oo intaa u dheer, waxaad u isticmaali kartaa xoogaa yar oo suug ah oo ku saabsan nidaamka in ka soo gudbinta fure u oggolaato Python inuu ku fuliyo howlaha maamulka serverka. , sida iska cad tixgalinta amniga ...
C + + Caqli gal, Python oo loogu talagalay isdhexgalka iyo caqli galnimada, qaacido aad ufiican oo codsi looga sameeyo QT. Dhab ahaan, Python waa wax weyn maxaa yeelay waxay taageertaa koodhka c + si aad u macquul ah, waxba kuma laha JNI, tusaale ahaan.
Sidoo kale waa in la sheegaa in aysan ahayn kaliya sahlanaanta isticmaalka, waxay kugu qasbeysaa inaad sameyso koodh la aqrin karo oo si fiican loo qaabeeyey, adigoo ka bilaabaya luqadaha kale sida c ++ kuma siinayo faa iidadan, xitaa ma awoodo xitaa Ka fikir bilowga Perl ...
Hadana haddii aan qof xumeeyey, aad baan uga xumahay, laakiin waa GVU (Xaqiiqda Guud ee Weyn).
barashada Python waa waxa iga maqan, waayo aragnimadayda waxay ku bilaabeen luuqada C si ay ugu dhaqaaqaan C ++ ka dibna ugu boodaan barxada Java laakiin waxaan u maleynayaa in ujeedada laga leeyahay Python ay tahay sida ugu fudud ee wax loo barto
Wanaagsan, fasaladayda gudaheeda waxaan uga faaloon doonaa ardaydayda, waa dood ansax ah in la bilaabo barnaamijyada lagu baro Python, kiiskeyga kuwa yar yar waxaan ku baraa Stacks-Engine (Python Library), waxay la shaqeeyaan barnaamijyada qaabaysan iyo OOP ogeysiis la'aan, waxaan u maleynayaa inay ku dhiirigelin doonaan inay iskood u sii wataan iyagoo adeegsanaya Software Free iyo Python
Waan jeclahay Python, mar walbana waxaan idhaahdaa waa doorashada ugu fiican ee lagu barto barnaamijyada. Si kastaba ha noqotee, waa inaad sidoo kale barataa tusaalooyin kale, maxaa yeelay luqad kasta waxay bixisaa wax ka duwan oo faa'iido leh. Wixii aanan ku raacsaneyn, waxay ku jirtaa waxbarista hal (1) ... iyo marar badan oo la xushay oo kaliya maxaa yeelay waxay bixisaa shaqo ka bax deg deg ah, ha ahaato Java, PHP, ama wax kasta.
Laakiin kuma raacsani gunaanadka maqaalka. Uma maleynayo in Python uu uga dhow yahay helitaanka dhulka marka loo eego Java ee ganacsiga, liddi ku ah. Java waxbadan baa hagaagay, waana qatar shirkadaha dhexdeeda, sababo badan awgood. Mid ka mid ah waa in lagu kalsoonaan karo: barnaamijyadu ma joojinayaan inay shaqeeyaan marka JVM la cusbooneysiiyo, kaliya runtii dhibaatooyin yaryar, iyo in Java 7 iyo 8 ay soo bandhigeen isbeddello fara badan oo xagga luuqadda ah, laakiin JVM weli waa meel walba. Sababta kale ayaa ah taageerada cajiibka ah ee qalabka iyo barnaamijyada iyo nidaamyada xisbiyada 3aad ee Java ay leedahay. Tusaale ahaan Python wuxuu ahaa riyo cabsi ah markii uu u wareegayay nooca 2 illaa 3, waxayna leeyihiin falsafad ah inay si farxad leh u jabiyaan API-yada haddii taasi ka dhigeyso luuqad nadiif ah oo fudud, taas oo siyaabo badan loogu amaano, laakiin waxay ku dhamaaneysaa inay ka soo horjeedo. si ay boos uga helaan shirkadaha.
Tusaale kale: Pascal, ADA iyo Smalltalk waxaa lagu baray jaamacado sannado badan. Xaqiiqdii waan bartay iyaga, waxayna ahayd wixii aan aad ugu isticmaali jiray kuleejka. Midkoodna ma lihi (waligoodna) awood suuqa, waxay aad ugu xiiso badan yihiin luqadaha, waxay baraan waxyaabo aad u wanaagsan, laakiin inay u adeegsadaan shirkadda, warshadaha, iyo bilowgaba, waxay saameyn ku leeyihiin waxyaabo kale. Sidaa darteed, guusha Python ee jaamacadaha ama Linux macnaheedu maahan inay si otomaatig ah u lahaan doonto guul ganacsi. Waxaan jeclaan lahaa inay sidaas ahaato, laakiin hal shay micnaheedu ma aha tan kale, waa waddooyin iyo deegaanno aad u kala duwan.
Haddii kale, maqaal aad u fiican, in kastoo aanan la wadaagin gunaanadka.
Ku jawaab gorlok
Aniga ahaan, waxaan ahay 6 sano jir, shaki la'aan waxa ugufiican waa isku soo aruuriyaha, c iyo c ++, dabcan waa inaad madaxaaga ka jabisaa wax kabadan kan Python. Barnaamijyada heer aad u hooseeya ayaa kuu oggolaanaya inaad sameyso waxyaabo aan lagaa filaynin. Hadda wax walba way fududdahay mise waxay noqon doontaa in mudaneyaasha Mareykanku aysan rabin inay muwaadiniintoodu bartaan sida loogu xadgudbo shabakadaha iyo waxyaabo kale oo aad u xiiso badan. hehehehe
Python ... Soo jeedin xiiso leh ... Gaar ahaan, haddii Google uu si aan kala sooc lahayn ugu adeegsado mashiinka wax raadinta iyo bogagga intiisa kale (marka laga reebo YouTube, oo adeegsaday tikniyoolajiyadda PHP illaa dhowaan).
Hagaag, waxaad maareysaa macluumaad aad dhif u ah, YouTube bilowgii wuxuu ku qoran yahay Python waana mid ka mid ah shuruudihii uu abuuray abuuristooda geliyay markii ay ka iibinayeen YouTube inay ahayd in koodhka la ilaaliyo, okay, ninku waa taageere python ah ... sidaa darteed waqtigaan oo dhan isagaa ansax ku ahaa isticmaalka Python-ka mana u maleynayo inay bedeleen ...
Dhanka kale, Mashiinka baaritaanka waa isku dar java, c ++ iyo luqadiisa java (oo xiran) si loo maareeyo xogta aanan xasuusan karin magaceeda ... inta aan ka ogahay oo aan ka aqriyay injineerada google ee quora, Python wuxuu ka badan yahay dhamaan luqadaha dhejiska iyo youtube-ka waxaana u maleynayaa injineer app
Thanks to qalabka sida Codecademy, waxaan bartay wanaagga iyo sahlanaanta isticmaalka Python. Inbadan sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo "luqadda hordhaca ah" koorsooyinka kumbuyuutarka ee jaamacadaha halkan ku yaal Chile. Nasiib darrose, waxaan weli ku nool nahay xilligii C / C ++, oo aanan dhihi karin waa ikhtiyaarro xun - waan bartay iyaga waqtigaas iyaguna way i xiiseeyaan - waxaan jeclaan lahaa inay jiraan waxyaabo badan oo la barto. Pythonna waxaan u maleynayaa inay tahay inuu ka mid noqdo 🙂
Waxaan ku koray ka shaqaynta matlab, waxaan ku soo qaatay casharkeyga jaamacadeed deegaankaas. Hadda oo aan sameynayo qorista sayidkayga waxaan ku horumarinayaa barnaamijka loo yaqaan 'Python' waxaanan dhihi karaa waxaan dareemay barnaamij aad u raaxo badan inta badan, in kastoo marmar ay madax xanuun noqoto, laakiin guud ahaan dhaqso ayaad u hormari kartaa waana jiraan maktabado badan oo kala duwan oo aad uga faa'iideysan karto inaad ka shaqeyso. Xitaa waxaa jira maktabado mowduucyo horumarsan leh sida mawjadaha gacanta oo wax badan iga caawiya shaqada.
Waxyaabaha xiisaha leh: Luqadaha barnaamijyada Esoteric
Xonotic, ciyaar badan oo ciyaartoy badan oo GNU / Linux ah